Maruva ezvakaipa, hunyanzvi hwaCharles Baudelaire | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Literature, Nhetembo, dzakawanda
Maruva eUipi (Les Fleurs du Mal, muchiFrench) ianthology yenhetembo dzakatukwa dzakanyorwa naCharles Baudelaire uye dzakaburitswa muna 1857. Izvi zvinonzi chimwe chezvinhu zvikuru mabasa munyori, ari muenzaniso French chiratidzo uye decadence. Chinyorwa ichi chiratidzo chenguva apo zvaive zvakakosha kuti munyori ashore bourgeoisie wehumambo hwechipiri.
Kubudikidza nekushandisa zvinehunyanzvi kwemazwi, basa rakashandira Baudelaire sekutiza kubva kune inonzi "spleen" (kunzwa kwekushushikana kushushikana kunonzwa mudetembi kana achinge arambwa nehunyengeri uye nzanga yakashata). Sekureva kwemunyori, nzira yakanakisa yekudzivisa kudemba uku ndeyokuita hunyanzvi, nhetembo, kunyanyisa uye rudo, izvo zvisiri kure nekutambura. Kune izvi nemamwe mabasa ake mazhinji Baudelaire inoonekwa seimwe yevananyanduri vakakurumbira venyika.
1 Nezve mamiriro ezvinhu
2 Maruva eUipi
3.1 Bhuku rekutanga rine zvikamu zvinomwe:
3.1.3 Chechitatu nechina
3.1.4 Chechishanu nechitanhatu
3.1.5 Chikamu chekupedzisira
4 1949 chinyorwa
Nezve mamiriro ezvinhu
Charles Baudelaire akafuridzirwa kunyora basa iri nenzvimbo dzakasviba uye dzakasviba dze XNUMXth century Paris art scene., kwaakachinjanisa pakati pechipfambi uye hashish, opiamu uye laudanum ... zvese izvi kutiza chokwadi chaitaridzika kuva chinorwadza. Pamusoro peizvi, hunhu hwazvino uno nehunhu hwazvo hwakamutungamira kuti atsvake hunhu hwehuipi, chirwere, rufu uye chinotyisa.
Semumwe, Baudelaire Akaedza kutsvaga mwenje mukati merima raimudya mumazuva iwayo. Nekudaro, munyori akazopedzisira abatwa neichi chinetso chisingachinji, icho chakazomudzosera munzira yehupenyu husina kugadzikana uye husina kutsarukana husina kuoneka munzvimbo yepamusoro-soro yeguta.
Akanyura mukugara kwake kwekushushikana uye kuona kwake kwakasarudzika kwehuipi, Baudelaire akanyora izvo nhasi zvinonzi zvakanakisa pamabasa ake. Maruva eUipi inotsvaga kusimbisa zvivi zvemunhu, ichisimbisa kusaziva kwake. Basa iro pacharo isampuro yekuvhenekerwa kwehunyanzvi sechiratidziro chemanzwiro akadzika emunhu.
Chaizvoizvo nekuda kwehunhu hwayo, inotyisa uye ine mbiri, kuti anthology iyi yakakonzera kupokana kukuru, zvichikonzera mudetembi matambudziko mazhinji emutemo. Munyori akatongerwa zvirimo mubhuku iri, akamanikidzwa kubvisa nhetembo dzake nhanhatu dzichinzi dzakazvibata zvisina hunhu kwenguva iyoyo. Pamusoro pezvo, Baudelaire aifanira kubhadhara faindi yemazana mazana matatu emafranc. Izvi, hongu, hazvina kutadzisa kuburitswa kuti kuitwe kwairi muna 1861, kusanganisira mamwe magwaro asina kunyorwa.
Basa racho rinoonekwa seyechinyakare dhizaini, uye zvemukati zvaro zvinoonekwa sekudanana. Ichi chivimbo chakagadzirwa seketani yenhetembo dzinopindirana uye dzakabatana, senyaya umo protagonist - mudetembi - zvishoma nezvishoma anodonha kubva pachinhu chinosiririsa uye anozvinyudza mukuwedzeredza kwehupenyu. Ari mune ino mamiriro, nyanduri anorondedzera mukadzi semunhu ane hutsinye anomutadzisa kukwira kuenda kujekeso.
Charles Baudelaire akatorwa.
Iri basa rakave neshanduko dzinoverengeka muchimiro charo nekufamba kwenguva. Izvi zvaifanirwa, sezvakataurwa, kune iyo yekuti mushure mekubatwa kwechinyorwa chakatorwa sehunhu hwakashata hwakavhiringidza kurongeka, rugare uye tsika dzakanaka dzenguva yacho.
Bhuku rekutanga rine zvikamu zvinomwe:
Muchikamu chekutanga chemutambo Baudelaire anozivisa veruzhinji nezvechiono chake kuburikidza nhetembo yake isingakanganwike "Kune muverengi." Pano munyori anozivisa (muchidimbu) izvo zvichauya gare gare; inzira inoita kuti kuverenga kuve padhuze.
Mushure meizvozvo, anoenda ku "Spleen uye Yakanaka", uko munyori anotsanangudza mafomu ake aanoda kunzvenga chokwadi chaanofanira kurarama; chokwadi chizere nekusurukirwa nekusaziva (iyo "Spleen"). Aya mafomu ari, echokwadi, hunyanzvi uye runako. Mu "Zvakanaka" anonyatsoratidza kupukunyuka zvishoma nezvishoma kubva pachokwadi ichi chaanofunga kuti chakashata.
Muchikamu chechitatu nechina ("Maruva Ezvakaipa" uye "Mapendi eParis") munyori anoedza kutsvaga runako muParis, izvo zvaakarasa. Nekudaro, kutsvaga uku hakuna hutsinye, zviitiko zvinotyisa uye huipi uhwo Baudelaire hunosanganisa zvakanyanya mudetembo rake.
Kana asingawani kukwirwa kwake kwakanyanya kana kuremekedzwa kweguta rake, munyori anodzokera mune zvakaipa. Apa ndipo pavanopinda chikamu chechishanu nechechitanhatu, "Kupandukira" uye "Waini", uye kubva kwavari hakuna kudzokera kuhupenyu hwakachena, hazvichakwanisika, kwete yaBaudelaire, kwete yenhetembo dzake.
Mune aya angangoita ekupedzisira matanho iwe unogona kuona yakakwana Dantesque pendi yakapendwa nanyanduri, iyo inopa nzira kune chikamu chechinomwe uye chekupedzisira, chinova ndicho chimwe kunze kwe "Rufu". Iri pano, sekuratidzwa kwezita rayo, kuti kuora kwese kunoitwa mukuparadzwa kwehupenyu. Hazvingagone kudaro.
Baudelaire, nehukuru hwake hukuru hwekugona tsamba, zvinehunyanzvi akakwanisa kuunza muverengi kududziro yeParis kwaari. Izvo zvakakosha kuti uzive, zvakare, kuti zvese izvi zvemukati hazvina kubuda pachena pakutanga nekuda kwekudzivirira.
Mukudhindwa kwapashure kwe Maruva eUipi se sanganisira mamwe enhetembo dzerudo dzakanaka kwazvo naCharles Baudelaire, Kugadzira chimiro chitsva chebasa, icho chinogona kuverengerwa seinotevera:
"Al Lector" ("Au Mudzidzisi").
"Esplín e Yakanaka" ("Spleen et Idéal").
"Maruva Ezvakaipa" ("Fleurs du Mal").
"Mapendi eParis" ("Tableaux Parisiens").
"Waini" ("Le Vín").
"Rufu" ("Le Mort").
Nekuda kwekukonana kwetsika kwakakonzerwa neanthology iyi, uye nenyaya yekuti aifanira kubvisa nhetembo nhanhatu Yakanga iri kusvika 1949 apo veruzhinji vaikwanisa kunakidzwa nehunhu uye eroticism yakazara mukati Maruva eUipi seyakagadzirwa nemunyori. Chinhu chinonakidza ndechekuti kugadziriswa kweiri basa kuchiri kuburitswa nanhasi.
Charles Baudelaire akaberekerwa muParis; Nhoroondo pamusoro pemunyori hadzijekese kana gore rekuzvarwa kwake riri 1821, kana makore gumi gare gare. Baudelaire aive nyanduri, nyanzvi yekutsoropodza, munyori wenyaya, uye muturikiri. Mune iri basa rekupedzisira akashanda achidudzira nhetembo uye nyaya dzeaakange achiona semumwe wevanonyanya kufarira-garde varume venguva yake: Edgar Allan Poe.
Iye anonzi mumwe wevanonyanya kukosha vadetembi wechiFrench chiratidzo, uye baba vekushata.. Baudelaire akashoropodzwa zvakanyanya nekuda kwebasa rake, uye akaverengerwa muchikamu che "akatuka nyanduri", izvi zvehupenyu hwake hwebhohemia uye kuona kwake kwakanyanya kwehuipi, rudo uye kufa. Akatumidzwa zvakare zita remadunhurirwa rekuti "Dante wenguva yemazuva ano", nekuda kwechiratidzo chimwe chete ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Maruva Ezvakaipa, magna anoshanda naCharles Baudelaire
Mumwe wevakuru vevanyori (uye kaputeni) wegungwa